China Fused Silica Manufacturer na Supplier | Dinglong
Dinglong fused silica bụ electrically gwakọtara silica dị ọcha. Fused silica nwere obere njupụta, obere nrụpụta nrụpụta na oke nrụgide ọkụ ọkụ. Njirimara ndị a na-eme ka ọ bụrụ ihe bara ezigbo uru yana ọtụtụ ihe iji rụọ ọrụ na refractory, foundry, electronics na ngwa ndị ọzọ pụrụ iche. Dinglong fused silica dị na ntụ ọka na ụdị ọka.
Ọ dị na ntụ ọka na ọka
Vasatail ihe maka iji na refractory ngwa
Ezubere Dinglong fused silica ka e mee maka ezigbo mmiri na-eguzogide ihe, na-egbochi ihe onwunwe, na ọnụọgụ dị ala nke mgbasawanye nke okpomọkụ. Silica anyị na-arụkọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na ngwa arụmọrụ na-achọ nkwụsi ike akụkụ yana ebe achọrọ njigide okpomọkụ.
Na itinye ego na nkedo, ejiri silica fused maka ụda olu ya. N'ezie, silica fused nwere ọnụọgụ mmụba nke ikuku dị ala nke ukwuu yana enwere ike ịnwepụta ọgbụgba enwere ike iwepụ mkpụmkpụ dị mfe.
Anyị na-ejikọ silica nwere nnukwu eletrik na-eguzogide ọgwụ na obere nkwonkwo ọkụ, ya mere a na-eji ya dị ka ihe nzacha na ihe ndị na-akpụzi epoxy maka ndị na-eduzi ọkara.
Dinglong fused silica dị na ntụ ọka na ụdị ọka. Anyị na-enye ma nkesa na usoro nhazi nke omenala. Ndị ọkachamara anyị ga - arụ ọrụ iji bulie ngwa gị. Dinglong fused silica ngwaahịa dị na 2,200 lbs. (1,000 kg) tote sacks.
A na-arụpụta ihe ndị silica a na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ a kwadoro na Lianyungang, China. Anyị ejikọtara ọnụ iji hụ na njikwa zuru oke na ogo na iguzosi ike n'ezi ihe nke quartz anyị si na nke m na onye ahịa. Anyị nwere ihe karịrị afọ 30 nke ahụmịhe n'ichepụta quartz ihe ma na-agba mbọ na-arụ ọrụ mgbe niile iji melite ihe quartz anyị na ndị ahịa anyị.
Nke gara aga: Silica Fused maka Ngwa Ntughari
Usedlọ ọrụ silica jikọtara
Fused Silica Manufacturer
Ihe E Ji Ejiri Silica
Ejiri Silica Fused